ဒီအခြိနျ …..ကား ဝယျသငျ့လား ? လူတိုငျး သိခငျြနမေယျ ထငျပါတယျနျော…….. – Nyi Ma Lay
ဒီအခြိနျ …..ကား ဝယျသငျ့လား ? လူတိုငျး သိခငျြနမေယျ ထငျပါတယျနျော……..
ဒီအခြိနျ ကားဝယျ သငျ့သလား ။ ။ ကြှနျတျောဖွေ ပါတယျ မိတျဆှေ မှာ ကားမရှိရငျ ဝယျပါ ဝယျလို့ရတယျ …. စီးဖို့ရာ ရှိပွီးသားဆိုရငျေ တာ့ ထပျမဝယျသငျ့ပါ ဒီအခြိနျ ဘယျလို ဝယျဝယျ ဗိုကျကွီးမယျ့ ဈေးတှခေညျြးပါဘဲ …. ကားဆိုတာ နှားမဟုတျပါဘူး ဘယျလောကျ အမောငျး တျောတျော တဈစငျးဘဲ စီးလို့ရမယျလေ
ဒီအခြိနျ ကားလဲ သငျ့သလား ။ ။ လေးစားစှာ နဲ့ ဖွပေါရစေ … မိတျဆှေ စီးနတေဲ့ ကားက စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈလောကျအောငျ မဆိုးသေးရငျ မလဲစီးသငျ့ပါ …. ခုခြိနျ အရောငျးထှ ကျလာတဲ့ ကားဈေးတ ကျတယျဆိုပွီး အသညျးအ သနျ အခြိနျကိုကျ ရောငျးတဲ့ ကားတှကေ မီးကွိုး မောငျးပကျြ ပုံမှနျအခြိနျ လူမသုံးတဲ့ ကားမြိုးတှေ မြားပါတယျ … မိတျဆှေ ကား ကောငျးရဖို့ ရာနှုနျးက 10% ဘဲရှိပါတယျ ….
ပိုနတေဲ့ ငှလေေး ကားထဲ ရငျး နှီးမွုတျနှံ သငျ့သလား ။ ။ ဖွပေါရစေ ကားက စကျပါ မသုံးရငျ ပကျြပါတယျ …. အရေးရယျ အကွောငျးရယျ နှဈစငျး ခှမောငျးလို့လညျး မရပါဘူး … စကျပစ်စညျးမို့ အခြိနျတနျရငျ အသဈ ထှကျပါတယျ ပူမနနေဲ့ ငှရှေိကွိုကျတဲ့ အခြိနျ ဝယျလို့ရတယျ …. ဒီကနေ့ ငှကွေေး ဖောငျးပှမှု ကို ကားဈေးနှုနျးနဲ့ ကာလို့ မရပါဘူး ဒါက အဓိက အခကျြပါ
ရငျးနှီးမွုတျနှံ ထားဖို့ထကျ ဒီအခြိနျမှာ တနျ့နဖေို့ဘဲ လုပျနိုငျမှာပါ …. ခဈြလို့ ပွောတယျ မှတျပါ … တောမီးလော ငျခြိနျ မီးဝိုငျးလို့ သတောထကျ အခငျြးခငျြး ပွေးရငျးလှားရငျး နငျးမိလို့ သကွေတာ မြားပါတယျ ….
လူဟာ အခကျအခဲ တှနေဲ့ ရငျဆိုငျတှလေ့လေေ သှေးအေး လလေေ ဘဲ ရှိရပါတယျ … သှေးရူး တနျးရူး ပွေးရငျ လမျးဆုံးရောကျသှားတကျပါတယျ …
မီးလောငျလို့ တတောလုံး ပွောငျသှားလညျး အခြိနျတနျရငျ ရှကျသဈတှေ သဈပငျတှေ မွပေျေါမှာ ရှငျသနျဦးမှာပါဘဲ …
မှောငျမိုကျတဲ့ အဆိုးဆုံး လမျးတှကေို ဖွတျသနျးခြိနျမှာ မတ်ေတာ တရားနဲ့ သာ ကြျောဖွတျနိုငျကွပါလိမျ့မယျ …. အကောငျးဆုံးကတော့ ကိုယျတိုငျမီးသတျသမား ဖွဈနရေငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့ဗြာ
ကားရောငျးတဲ့ေ ကာငျက ကားမဝယျသငျ့ဘူး ပွောရငျ အဆနျးကွီး လုပျပွီး လာပွောဦးမယျ ကားရောငျးတဲ့ကော ငျမို့သိတာပေါ့ဟ …. ဝယျသငျ့လား မဝယျသငျ့ဘူး လားကို …. ဒီလောကျမှ မသိရငျ ငတျသေ တာကွာပွီ ဆယျစုနှဈနဲ့ ခြီလု ပျလာတာဘဲ အပငျြးပွေ လုပျတာမှ မဟုတျတာ ဒါက ကြှနျတေျာ့ အသကျမှေးဝမျွးေ ကာငျး စီးပှားရေး ဒီအလုပျနဲ့ နတေို့ငျးထမငျး စားနတောလေ …. စတေနာနဲ့ ပွောတယျ မှတျပါ
တိုငျးပွညျလှု ပျနတေဲ့အခြိနျ ကားဝယျစုဖို့ ဘယျသူ ခြောကျတှ နျးလိုကျတာလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး …အရကျ ဝိုငျးက ထှကျလာတဲ့ ဗရီးဗဒါး စကားတှပေါ …. ကိုယျဘာသာလညျး နညျးနညျးေ တှးပါဗြာ … ကိုယျ့က Mission Impossible ရိုကျမညျ့ Tom Cruise လညျး မဟုတျ …. အပွငျမှာ သှားမလုပျနဲ့ သတောဘဲ အဖကျတငျမယျ မရဘူး လူတဈယော ကျတညျးတောငျ ထိအော ငျပဈနတော …. ကားနဲ့ဆို ပဈမလှဲဘဲ … တခါတလေ ခဏလောကျ ထိုငျစဉျးစားရငျ အဖွပေျေါပါတယျ …
သူတျောကောငျး တရားနရော တိုငျးမှာ ထှနျးကားပါစေ ခဈြခွငျးစတေနာ မတ်ေတာ မြားစှာဖွငျ့
Ko James ဇျောမြိုး(BFBM 🇲🇲) တောငျကွီးမွို့၊အေးသာယာ၊စကျမှုဇုနျလမျးဘေး၊ရပျကှကျ(၁၀)
ဒီအချိန် ကားဝယ် သင့်သလား ။ ။ ကျွန်တော်ဖြေ ပါတယ် မိတ်ဆွေ မှာ ကားမရှိရင် ဝယ်ပါ ဝယ်လို့ရတယ် …. စီးဖို့ရာ ရှိပြီးသားဆိုရင်ေ တာ့ ထပ်မဝယ်သင့်ပါ ဒီအချိန် ဘယ်လို ဝယ်ဝယ် ဗိုက်ကြီးမယ့် ဈေးတွေချည်းပါဘဲ …. ကားဆိုတာ နွားမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်လောက် အမောင်း တော်တော် တစ်စင်းဘဲ စီးလို့ရမယ်လေ
ဒီအချိန် ကားလဲ သင့်သလား ။ ။ လေးစားစွာ နဲ့ ဖြေပါရစေ … မိတ်ဆွေ စီးနေတဲ့ ကားက စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်လောက်အောင် မဆိုးသေးရင် မလဲစီးသင့်ပါ …. ခုချိန် အရောင်းထွ က်လာတဲ့ ကားဈေးတ က်တယ်ဆိုပြီး အသည်းအ သန် အချိန်ကိုက် ရောင်းတဲ့ ကားတွေက မီးကြိုး မောင်းပျက် ပုံမှန်အချိန် လူမသုံးတဲ့ ကားမျိုးတွေ များပါတယ် … မိတ်ဆွေ ကား ကောင်းရဖို့ ရာနှုန်းက 10% ဘဲရှိပါတယ် ….
ပိုနေတဲ့ ငွေလေး ကားထဲ ရင်း နှီးမြုတ်နှံ သင့်သလား ။ ။ ဖြေပါရစေ ကားက စက်ပါ မသုံးရင် ပျက်ပါတယ် …. အရေးရယ် အကြောင်းရယ် နှစ်စင်း ခွမောင်းလို့လည်း မရပါဘူး … စက်ပစ္စည်းမို့ အချိန်တန်ရင် အသစ် ထွက်ပါတယ် ပူမနေနဲ့ ငွေရှိကြိုက်တဲ့ အချိန် ဝယ်လို့ရတယ် …. ဒီကနေ့ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု ကို ကားဈေးနှုန်းနဲ့ ကာလို့ မရပါဘူး ဒါက အဓိက အချက်ပါ
ရင်းနှီးမြုတ်နှံ ထားဖို့ ထက် ဒီအချိန်မှာ တန့်နေဖို့ဘဲ လုပ်နိုင်မှာပါ …. ချစ်လို့ ပြောတယ် မှတ်ပါ … တောမီးလော င်ချိန် မီးဝိုင်းလို့ သေတာထက် အချင်းချင်း ပြေးရင်းလွှားရင်း နင်းမိလို့ သေကြတာ များပါတယ် ….
လူဟာ အခက်အခဲ တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့လေလေ သွေးအေး လေလေ ဘဲ ရှိရပါတယ် … သွေးရူး တန်းရူး ပြေးရင် လမ်းဆုံးရောက်သွားတက်ပါတယ် …
မီးလောင်လို့ တတောလုံး ပြောင်သွားလည်း အချိန်တန်ရင် ရွက်သစ်တွေ သစ်ပင်တွေ မြေပေါ်မှာ ရှင်သန်ဦးမှာပါဘဲ …
မှောင်မိုက်တဲ့ အဆိုးဆုံး လမ်းတွေကို ဖြတ်သန်းချိန်မှာ မေတ္တာ တရားနဲ့ သာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ် …. အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်တိုင်မီးသတ်သမား ဖြစ်နေရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ
ကားရောင်းတဲ့ေ ကာင်က ကားမဝယ်သင့်ဘူး ပြောရင် အဆန်းကြီး လုပ်ပြီး လာပြောဦးမယ် ကားရောင်းတဲ့ကော င်မို့သိတာပေါ့ဟ …. ဝယ်သင့်လား မဝယ်သင့်ဘူး လားကို …. ဒီလောက်မှ မသိရင် ငတ်သေ တာကြာပြီ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီလု ပ်လာတာဘဲ အပျင်းပြေ လုပ်တာမှ မဟုတ်တာ ဒါက ကျွန်တော့် အသက်မွေးဝမ်ြးေ ကာင်း စီးပွားရေး ဒီအလုပ်နဲ့ နေ့တိုင်းထမင်း စားနေတာလေ …. စေတနာနဲ့ ပြောတယ် မှတ်ပါ
တိုင်းပြည်လှု ပ်နေတဲ့အချိန် ကားဝယ်စုဖို့ ဘယ်သူ ချောက်တွ န်းလိုက်တာလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး …အရက် ဝိုင်းက ထွက်လာတဲ့ ဗရီးဗဒါး စကားတွေပါ …. ကိုယ်ဘာသာလည်း နည်းနည်းေ တွးပါဗျာ … ကိုယ့်က Mission Impossible ရိုက်မည့် Tom Cruise လည်း မဟုတ် …. အပြင်မှာ သွားမလုပ်နဲ့ သေတာဘဲ အဖက်တင်မယ် မရဘူး လူတစ်ယော က်တည်းတောင် ထိအော င်ပစ်နေတာ …. ကားနဲ့ဆို ပစ်မလွဲဘဲ … တခါတလေ ခဏလောက် ထိုင်စဉ်းစားရင် အဖေ​ပြေါ်ပါတယ် …
သူတော်ကောင်း တရားနေရာ တိုင်းမှာ ထွန်းကားပါစေ ချစ်ခြင်းစေတနာ မေတ္တာ များစွာဖြင့်
Ko James ဇော်မျိုး(BFBM 🇲🇲) တောင်ကြီးမြို့၊အေးသာယာ၊စက်မှုဇုန်လမ်းဘေး၊ရပ်ကွက်(၁၀)
Previous post ဈေးကဝယျလာတဲ့ ပုဇှနျ ကို မသင်ျကာလို့ စဈကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါမှာတော့……..
Next post ခန်ဓာကိုယျမှာ အလုပျအမြားဆုံး အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ အသညျး ကို ပွနျလညျသနျ့စငျခွငျး